Vaovao - Ny orinasanay dia nanamarina tamim-pahombiazana ny momba ny AUDITED SUPLIER sy ny BSCI-AUDITED
Tamin'ny faran'ny taona 2019, ny biraon'ny Shijiazhuang an'ny orinasanay dia nitondra ny mpiambina ny orinasa SGS Tianjin Branch, nanao fanaraha-maso an-toerana ho an'ny orinasanay izy ireo, ny atiny momba ny lozisialy dia manondro ny fahazoan-dàlana momba ny fisoratana anarana, ny fisoratana anarana amin'ny orinasa fanondranana, ny ara-bola isan-taona.
Fanambarana, habaka birao, firafitry ny orinasa, rafitra fitantanana ary syeterme QC. Ankoatr'izay dia nisedra tsirairay ny vokatray koa i The. Toy ny fonon-tànana ondrilahy, fonon-koditra zanak'ondry, satroka hoditr'osy, fandrobana an'ny zanak'ondry, rugs sns. voamarina tsara, ary raiso ny tatitra fanamarinana SGS avy eo.
Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa mpamokatra fonon-tanana vita amin'ny fonon'ondry izay nampiasain'ny orinasanay dia nojerena niaraka tamin'ny BSCI indray mandeha isan-taona.
Ireo inspektera dia nanadinadinina mpiasa tsirairay, ny resadresaka dia manondro ny rafi-piasan'ny rafitra fiarovana ny mpiasa, systerm fanofanana ny mpiasa, ny rafi-karaman'ny mpiasa, ny tontolon'ny asa ary ny olana hafa, ary koa nanao fanombanana maromaro momba ny lafiny hafa amin'ny orinasa. AUDITED amin'ny taona 2020 dia hohamarinina tsara ihany koa, kilasy C.
Ny orinasanay dia miziriziry manao ireo fanamarinana roa ireo, heverinay fa andraikitray izany, andraikitra amin'ny fiaraha-monina. Ary koa fanoloran-tena ho an'ny mpanjifanay rehetra. Ny foto-kevitry ny vokatra dia ny manatsara hatrany, tsy amin'ny fikatsahana ny fahatsorana sy ny hakantony ihany koa, amin'ny fahaiza-manao kanto toy ny fonon-janak'ondry zanak'ondry avy amin'ny loharano dia tsy mampiasa afa-tsy ny fampiasana azy.
Ny hoditr'ondry merino dia tsy manana formaldehyde sy akora manimba hafa. Ary ny hoditr'ondry tsirairay dia voafantina tsara. Rehefa tonga amin'ny fizotry ny fanjairana dia tanan'ny mpanao asa tanana manana traikefa mihoatra ny 10 yrs izany. .Hanao tsara ny antsipiriany rehetra izahay. Misisika ihany koa izahay amin'ny fanaovana serivisy aorinan'ny varotra tsara, mampanantena izahay raha misy fonon-tànana tsy misy kilema, hanavao vaovao ho anao izahay!
Fanamarihana: Noho ny tsiambaratelon'ny varotra dia ampahany amin'ny atiny ihany no aseho. Azafady azafady amin-katsaram-panahy.